Etu esi tinye ụzọ mkpirisi kọntaktị na Telegram | Gam akporosis
Nyere mgbanwe nke Telegram na-ekele ekele maka enweghị akọ nke WhatsApp nwere, mmelite dị ka mbipute 7.5.0 dị mma nke mere na ha nọgidere na-agbakwunye ndị ọrụ ndị ọzọ n’obi ha; dị ka ndị ahụ 100 nde nke otu ndị ahụ nwetara Telegram na nke mbụ na Jenụwarị nke afọ a.
Na mmelite ohuru a, nke ngwa Durov mara anyi aru, anyi nwere ike chọta ozi ehichapụ na akpaghị aka yana usoro wijetị. N'ezie, ị nwere ike ịchọta ngwa nbudata Telegram ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta mmelite ahụ na Playlọ Ahịa Google. Gaa maka ya.
1 Ihichapụ onwe nhicha ozi
2 Ihe ọhụrụ Telegram wijetị
3 Otu esi tinye kọntaktị n'ụlọ nke ekwentị anyị
4 Ozi ndị ọzọ sitere na Telegram: Koodu QR na otu mgbasa ozi
Ihichapụ onwe nhicha ozi
A na-eji akaaka nhichapụ akpaaka na-arụ ọrụ maka nkata ọ bụla site na bọtịnụ ahụ nwere ntụpọ atọ kwụ ọtọ dị n’elu aka nri ka ịchọta “akụkọ doro anya” ma họrọ oge. N'ezie, anyị nwere naanị nhọrọ abụọ: awa 24 na ụbọchị asaa.
M pụtara na ọ bụrụ na anyị kpọtụrụ onye anyị chọrọ ka nkata na-apụ n'anyaNaanị anyị ga-eji aka rụọ ọrụ ya iji chefuo nkata ahụ. Site na menu nke ozi anyị ga-enwe ike ịhụ oge fọdụrụ maka ozi ndị a ga-ehichapụ ruo mgbe ebighi ebi.
Ihe ọhụrụ Telegram wijetị
Maka gam akporo anyi nwere wijetị abụọ anyị nwere ike iji n'ụlọ ma ọ bụ desktọọpụ nke ekwentị anyị. Nke mbụ bụ wijetị Chat, nke nwere ọrụ maka igosipụta nlele nke ozi ndị na-adịbeghị anya; mgbe nke abụọ bụ wijetị nke Shortzọ mkpirisi, nke ahụ na-egosi naanị aha na foto nke profaịlụ kọntaktị ahụ.
Ha abụọ nwere ike hazie ozi na kọntaktị na anyị chọrọ itinye na wijetị ahụ anyị ga-edobe na desktọọpụ nke ekwentị anyị.
Otu esi tinye kọntaktị n'ụlọ nke ekwentị anyị
Site na Widgets panel mgbe ị na-ahọrọ nke abụọ anyị nwere ike hazie kọntaktị anyị chọrọ ka ịgbakwunye:
Anyị pịa agbatị na desktọọpụ ma ọ bụ n'ụlọ nke mobile
Site na wijetị anyị na-achọ Telegram
Anyị na-ahọrọ ma anyị nwere ike ịhọrọ n'etiti abụọ dị
Anyị na-ahọrọ onye nke nnweta kọntaktị kpọmkwem
Ugbu a, anyị pịa bọtịnụ mgbakwunye ma anyị na-achọ kọntaktị anyị chọrọ ịnweta ohere
Njikere anyị ga-enweta ụzọ kpọmkwem na afụ na-egosi ozi anyị ga-agụ site na kọntaktị ndị ahụ na ngwa izipu ozi Durov.
Ozi ndị ọzọ sitere na Telegram: Koodu QR na otu mgbasa ozi
Ihe ndi ozo ohuru bu ufodu oganihu ndi ozo. Ugbu a ị nwere ike gbanwee njikọ ịkpọ oku na koodu QR; na n'ezie ọ ga-abụ a ọtụtụ-eji nhọrọ n'ihi otú mfe ọ bụ itinye a koodu ebipụtara na akwụkwọ ebe ọ bụla nke mere na onye ọrụ ọ bụla ma ọ bụ onye ahịa ọ bụla nwere ike ịbanye otu otu.
Njikọ njikọ njikọ otu, Ugbu a, anyị nwere ike ịtọ oke ịgba akwụkwọ ịkpọ oku enwere ike iji ya ma ọ bụ oge. Nke ahụ bụ, ịnwere ike ịtọ oge a kara aka maka njikọ ahụ ga - arụ ọrụ, yana anyị nwere ike ịkọwapụta ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ yana aha otu ndị jiri njikọ ịkpọ oku na Telegram.
Na njedebe ọzọ maka otu karịrị ndị ọrụ 200.000. Telegram gụnyere nhọrọ mee ka otu ndị a bụrụ "mgbasa", na n'ezie, na-enweghị oke ndị ọrụ na-enye n'efu mmanya maka ndị nwere otu n'ime otu ndị a.
Anyị nwekwara ike ịgbakwunye emojis ndị na-eme egwuregwu, akụrụngwa akuko ka mma, na mbubata nkata ka mma; nke mere na ozi ndị batara na-egosi iwu na ụbọchị mbụ ha.
una nnukwu Telegram melite na wijetị, Koodu QR maka njikọta na nhichapụ ozi onwe dị ka ihe kacha mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu esi tinye ohere na kọntaktị Telegram na desktọọpụ: nke ọhụrụ na 7.5.0 nwere ozi na-ehichapụ na-akpaghị aka